Olee otú ndabere Blackberry Ndi ana-akpo ma nyefee ha na ngwaọrụ ndị ọzọ
Akwado gị blackberry kọntaktị na ndị ọzọ na data bụ ihe dị oké mkpa nzọụkwụ iji chebe gị data bụrụ na ọ na-efu ruru ka usoro bara ma ọ bụ software njehie. Ke adianade do, ọtụtụ ugboro n'oge formatting, i nwere ike ida kọntaktị gị n'amaghị ama na e nwere ọtụtụ nhọrọ iji weghachite ha. Ụzọ kasị mma ị nwere ike ịpụ maka bụ ndabere gị data nke mere na i nwere ike inwe ohere gị mkpa data ma ọ bụ ọbụna nyefee ha ka ha ngwaọrụ ndị ọzọ.
Uru nke akwado gị blackberry kọntaktị na ndị ọzọ na data bụ na ọ dị otú ahụ ngwa ngwa na oru oma niile mgbe. Ọ dịghị ewe oge ndabere data na ị nwere ike iweghachi ya a click nke a bọtịnụ. The kwadoo faịlụ nwere ike zọpụta na PC gị na ọ bụ ngwaọrụ ọzọ. E nwere ụzọ dị iche iche nke ị nwere ike ndabere gị blackberry na kọntaktị na ndị kasị ewu ewu n'ime ha na-agụnye iji Blackberry Desktọpụ Manager.
Part 1: Ndabere Blackberry Ndi ana-akpo na Blackberry Desktọpụ Manager
Nkebi nke 2: Nyefee Blackberry Ndi ana-akpo ka iPhone ma ọ bụ Android Devices
Blackberry Desktọpụ Manager dị mfe iji software nkwado ndabere na mpaghara na weghachite kọntaktị gị na ndị ọzọ na data ọzọ ngwaọrụ. Ọ na-eme a mma oyiri nke gị niile dị mkpa data ma na-enye gị nweta ya n'oge ọ bụla. I nwekwara ike na-echebe ya na a paswọọdụ (na-encrypting ya) mere na gị data anọgide mma si bụla na-achọghị anya. E nwere iche iche nsụgharị a software tupu gị n'ihu na otu hụ na ọ bụ dakọtara na na ngwaọrụ i nwere. Ọtụtụ n'ime ndị nsụgharị nwere otu usoro nke nkwado - ndabere na Iweghachi data karịsịa kọntaktị ma ụfọdụ nzọụkwụ nwere ike iche na. Anyị na-eji otu n'ime ihe ndị kasị elu nsụgharị nke software - Blackberry Desktọpụ Manager 6.0 maka PC. Nzọụkwụ bụ otu n'ihi na 7.1 version kwa na ọ fọrọ nke nta yiri gara aga nsụgharị.
Ndị na-esonụ mkpa a ga-agbaso-eji nke a software na nkwado ndabere data -
1. Jikọọ gị blackberry gị PC ma ọ bụ ndị ọzọ dakọtara ngwaọrụ.
2. Mepee Blackberry Desktọpụ Software na pịa Ngwaọrụ mgbe ahụ Back elu.
3. Pịa na Full (niile ngwaọrụ data na ntọala) ndabere niile ngwaọrụ data.
4. Pịa Back elu bọtịnụ na Ikwupu Smartphone mgbe usoro completes.
5. Your azụ elu data faịlụ a ga-azọpụta gị Documents nchekwa.
I nwekwara ike encrypt gị azụ elu faịlụ site na-echebe ya na a paswọọdụ wee na ọ dịghị onye ọzọ karịa i nwere ike inwe ohere ya. Ọ bụrụ na ị na-echefu ndabere gị ngwaọrụ ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ, e nwere otu akpaka azụ elu atụmatụ dịnụ na ike mfe inyere gị aka.
The faịlụ na ị kwadoo na PC gị na ọ bụ ngwaọrụ ọzọ bụ nchebe oyiri nke gị niile dị mkpa data. Otú ọ dị, ị nwere ike ghara ele ndị a faịlụ na PC gị na ma ọ bụ na ihe ọ bụla ọzọ ma e wezụga ngwaọrụ a Blackberry Smartphone. Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe ekwentị gị ka ọhụrụ iPhone ma ọ bụ Android ntị? N'ihi ya, ọ dị mkpa iji weghachi a data ọzọ na ngwaọrụ ma ị nwere ike mfe ime nke a iji na-eweghachiri software dị ka Wondershare Mobiletrans. Nke a software ga-aka mfe nyefee gị data site na otu agadi ekwentị na a ọhụrụ ekwentị.
Nyefee ọdịnaya n'etiti iDevice, Android na Symbian igwe na 1 click
Nyefee kọntaktị site na Motorola ka iPhone, na ọrụ aha, adreesị ozi-e na ndị ọzọ Ama.
Tọghata na idetuo ọdịyo na video ka iPhone, ọ dịghị ihe wepụrụ na gị iPhone.
Bugharịa ederede ozi, kalenda, na foto na Motorola ka iPhone enweghị jailbreak
Dakọtara na iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, Motorola Moto X, Motorola Droid RAZR, na ndị ọzọ.
Wondershare MobileTrans-Enyere gị aka nyefee kọntaktị, ozi na mgbasa ozi site na otu ngwaọrụ ọzọ enweghị ihe ọ bụla hassle. I nwekwara ike nyefee gị niile kọntaktị, ozi, ọbụna na-akpọ ndekọ. Ọ na-arụ ọrụ Android, OS na ọbụna na Symbian nyiwe. Niile i nwere ime bụ na-eso ole na ole nzọụkwụ na ị na-eme. Nke a na-arụ ọrụ ọma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee niile data site na gị ochie ekwentị ọhụrụ gị na ekwentị. Ke adianade do, ọ bụ na-enye aka nyefee azụ elu faịlụ ka a ngwaọrụ ọhụrụ bụrụ na nke a usoro njehie ma ọ bụ software ọdịda. A bụ otú o si arụ ọrụ -
Nzọụkwụ 1 - Jikọọ ma gị na ngwaọrụ na kọmputa
Jikọọ ma ndị ngwaọrụ na kọmputa ie onye site na nke data a na-agafere nke ọzọ nọ na nke data a na-agafere. Wee wụnye-agba ọsọ ahụ Wondershare MobileTrans. Pịa na Malite bọtịnụ ịbanye ekwentị na ekwentị transfer taabụ na software ga-akpaghị aka na-aghọta na ngwaọrụ gị na e ejikọrọ na kọmputa. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị aghọta na ngwaọrụ mgbe ahụ remve ha na jikọọ ha ọzọ na kọmputa.
Nzọụkwụ 2 - Malite na-ebufe data site na otu ekwentị ọzọ
The software-enyocha kwa isi iyi na ekwentị na ga-depụta niile ihe na ike ga-depụtaghachiri na zigara gị ọzọ na ekwentị. Ndepụta ga nwere stof ka kọntaktị, ozi ederede, media (onyonyo, na vidiyo) na ọbụna ngwa. Ị nwere ike mfe họrọ ndị na ị chọrọ iji weghachite na nyefe. Wee pịa Malite Copy bọtịnụ na ha ga-akpaghị aka depụtaghachiri gị ọzọ na ekwentị enweghị ihe ọ bụla hassle.
Ndị a bụ ndị abụọ kasị ewu ewu ụzọ nyefee data gị blackberry ọzọ. I nwekwara ike na-agbalị ịchọta ụzọ ndị ọzọ dị ka mma. E nwere iche iche ndị ọzọ softwares nakwa na enyemaka na otu ọrụ ma ị pụkwara inwe free ọnwụnwa na onye ọ bụla n'ime ha.
Top 6 Ndi ana-akpo ndabere Solutions maka ekwentị gị
Top Iri Best DVD Players maka Windows 8
Top 50 music ọkpụkpọ maka Windows / Mac / iOS / Android
Total Video Converter- Nyocha na Alternatives
Freemake video Ntụgharị reviews na uzo ozo
Top 20 free audio video converters.
Top 5 Free égwu Iji nyere gị aka encrypt gị Text Ozi
> Resource> Top List> Olee otú ndabere Blackberry Ndi ana-akpo ma nyefee ha na ngwaọrụ ndị ọzọ